Gburugburu ụlọ ọrụ mmepụta ihe - Baoding Lead Fluid Technology Co., Ltd.
Nfuli Peristaltic na-agbanwe agbanwe
Nfuli mmiri nwere ọgụgụ isi
Mgbapụta mgbapụta Peristaltic
Nfuli Peristaltic Microliter
Pump Nyefe Peristaltic Pumps
Nfuli mgbawa gbawara agbawa
Mgbapụta mgbapụta ụgbọ ala Pneumatic
Pumpon Piston Rotary
Mgbapụta sirinji ụlọ nyocha
Nfuli ntụtụ ụlọ ọrụ
Nfuli Gear na -agbanwe agbanwe
Mgbapụta Gear na -ekesa
Ụlọ ọrụ nyocha
Ụlọ ọrụ ahụike
Ụlọ ọrụ gburugburu ebe obibi
Vidiyo mgbapụta Peristaltic
Vidiyo mgbapụta sirinji
Flu Gas Monitoring Environment
Sistemụ nleba anya ikuku anwụrụ ọkụ na -aga n'ihu (CEMS) na -ezo aka na ngwaọrụ na -enyocha nlebara anya na mkpofu nke ihe na -esi na mmiri na obere ihe sitere na isi mmalite ikuku ma na -ebunye ozi ahụ n'aka onye isi ruru eru ozugbo. Site na nlele saịtị, a na-atụkọọ mkpokọta nke mmetọ na flue gas, a na-atụkwa nha dị ka ikuku ikuku ikuku, nrụgide, ọnụego mmụba, iru mmiri, na ọdịnaya oxygen n'otu oge, yana ọnụego mgbapụta na ego flue. A na -agbakọ ihe mmetọ ikuku gas.
Mgbe gasị nlele batara n'ime kabinụ nyocha, mmiri dị na gas nlele na -ekewapụ ngwa ngwa site na sistemụ nsị na mmiri nke na -agbada. Usoro dehumidification na -abụkarị condenser, mgbapụta nlele, mgbapụta peristaltic na mkpu metụtara ya na ihe njikwa. A na -eji mgbapụta peristaltic na -agbapụta condensate.
Mmejọ ndị a na -ahụkarị maka sistemụ nlegharị anya flue gas bụ: mmetụta jụrụ oyi nke condenser adịghị mma, yana oke mmiri n'ime ihe nlele anaghị ekewa, nke na -emetụta ọrụ nkịtị nke onye nyocha flue gas. Ọ bụrụ na ọ na -agba ogologo oge, ọ ga -emebi onye nyocha.
Nlekọta gas kwesịrị ka ọ hụ na usoro sistemụ nleba anya siri ike. Ya mere, a na -achọ ka usoro mgbapụta condensate nwee ezigbo njigide iji gbochie ikuku dị n'èzí ịbanye na condenser site na usoro nsị mmiri ma na -emetụta ihe mejupụtara gas.
Mkpokọta ahụ nwere ihe mejupụtara kemịkalụ dị mgbagwoju anya ma na -emebi emebi. Ya mere, usoro drainage condensate ga -enwerịrị nguzogide corrosion dị mma. Mgbe nsonaazụ nzacha gas adịghị mma, mmiri a kpụrụ akpụ ga -enwe irighiri ihe siri ike, yana usoro mkpofu mmiri kwesịrị ịdị mma maka mmiri na -asọ asọ. Ihe mgbapụta mmiri kwesịrị ịdị mma maka gburugburu oghere ma nwee ike na -aga n'ihu.
KT15 usoro mgbapụta peristaltic
• Isi mgbapụta KT15 mgbapụta dị mma maka ID0.8 ~ 6.4mm, ọkpụrụkpụ mgbidi 1.6mm Pharmed, silicone tube, Viton wdg, ọ nwere ike na -aga n'ihu n'okpuru na 100rpm na Max na -asọba ọnụego 255ml/min, na -agba ọsọ, Max ọsọ 250rpm , max flow r riri 630ml/min.
• KT15 mgbapụta isi ala ala na -eji ihe eji agbanwe agbanwe na -agbanwe agbanwe, nwere ike ịnye oke nkenke ọfụma yana ezigbo ọmarịcha ndụ.
• Enwere ike idozi oghere tube nrụgide, dabara adaba maka ọkpụrụkpụ mgbidi dị iche iche yana imepụta nrụgide ọzọ.
• Pump isi ahụ site na iji ihe PPS, ahụ rollers na -eji ihe PVDF, ezigbo ihe eji arụ ọrụ na nguzogide kemịkal.
• Mkpuchi isi isi na-eji plastik translucent, na-ekiri ọnọdụ mgbapụta isi arụ ọrụ n'ime nke ọma, na-egbochi irighiri mputa n'ime isi mgbapụta, ọrụ mmechi mkpuchi (nhọrọ).
• Igwe nrụnye nwere ụdị abụọ: njikọ njikọ etinyere na clip tube, nke dabara maka ihe achọrọ.
• Ụdị ọkọnọ 57 stepper moto, AC synchronous motor and AC/DC gear motor drive, panel and board board method, ọ dabara maka iji obere ngwa na ngwa na-agbanwe agbanwe.
TY15 usoro mgbapụta peristaltic
• Lead Fluid TY15 （spring easy-load） head pump na-ewepụta usoro nhazi dị mfe ibu, ịpịgharị elu dị elu, usoro rola mmiri, ọkpọ ahụ dị mfe ịwụnye ma nwee ndụ ọrụ ogologo.
• Ahụ ihe na -emegharị ahụ nwere ihe eji akụta wiil, na ọkpọ ahụ nwere ntụkwasị obi na -agba ọsọ dị elu.
• Ejiri ngwa njikọ pụrụ iche pụrụ iche, a na -edobe ọkpọ ahụ ka ọ tụkwasị obi.
• A na-eji igwe arụ ọrụ niile arụ ọrụ nwere nnukwu ihe eji arụ ọrụ yana ezigbo nguzogide kemịkal.
• Kwesịrị ekwesị maka ụdị moto. Kwesịrị ekwesị maka ngwa na -aga n'ihu, enwere ike iji ya na akụrụngwa, akụrụngwa, ụlọ nyocha, wdg, dabara adaba maka COD, CEMS nleba anya n'ịntanetị.
Uru nke mgbapụta mmiri mgbapụta peristaltic
1. Ọ nwere ezigbo ikuku ikuku, ọ dịghị valvụ na akara dị mkpa, ọ nweghịkwa nkwụghachi azụ mmiri na siphon ga -eme. Ọbụlagodi mgbe mgbapụta ahụ anaghị arụ ọrụ, a ga -afanye eriri ahụ ma kaa ya akara nke ọma, nke nwere ike igbochi ikuku dị n'èzí ịbanye na condenser site na usoro nsị mmiri wee metụta nsonaazụ nyocha gas.
2. Mgbe ị na -ebufe mmiri mmiri, mmiri ahụ na -akpọtụrụ naanị n'ime oghere nke sooks. Ịhọrọ eriri nke ihe na-eguzogide corrosion kwesịrị ekwesị ka enwere ike iji nyefee condensate corrosive ruo ogologo oge.
3. Site n'ike ịkwa osisi dị ala, mgbe ị na -ebufe mmiri nwere ihe siri ike, ọ gaghị enwe nsogbu mkpọchi, ọ gaghị emetụta ndụ ọrụ nke mgbapụta ahụ.
4. Site n'ike nke na-akwalite onwe ya nke ọma, na mgbapụta ahụ nwere ike na-ata nkụ n'enweghị mmebi ọ bụla, ọ nwere ike mebie condensate nke ọma wee belata ọnụ ahịa mmezi.
Mba 999 Fuxing Road, Baoding, China